आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, हेर्नुहाेस कतिमा हुँदैछ काराेबार ? - सिम्रिक खबर
आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, हेर्नुहाेस कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुन प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले बढेको हो । मंगलबार पनि ९ सयले बढेको थियो । छापावाल सुनको आजको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । आइतबार ६ सय रुपैयाँले घटेको सुनचाँदीको मूल्य सोमबार स्थिर भएको थियो ।
अघिल्लो हप्ता लगातार ३ दिन घटेको सुनको मूल्य शुक्रबार ८ सयले बढेको थियो । मंगलबार १७ सयले घटेको सुन बुधबार १२ सयले घटेको थियो । विहिबार पनि सुन १२ सयले घटेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन तोलामा ९४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यता चाँदीको मूल्य पनि आज १५ रुपैयाँले बढेको छ । महासंघका अनुसार चाँदी आज प्रतितोला १,१९० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्य अस्थिर रहँदै आएको छ ।